Nwam, Bill, na - eduga n'ichepụta ụda maka arụmọrụ nke ụlọ akwụkwọ sekọndrị nke Ọkachamara nke Oz. Nwa m nwanyị ga-anọkwa n'ime ya, na-akpọ otu Munchkin. Katie na-enwetara ụfọdụ nlele ndị na-egwu egwu cool dị ezigbo mma ebe ọ bụ naanị na Middle School! Ọ bụụrụ ya oke ike ịnweta egwuregwu ahụ. Ọ hụrụ ya n'anya kpamkpam. Ọ na-eju m anya mgbe niile na talent ụmụ m abụọ.
Dịka ị pụrụ iche n’echiche, ụbọchị m na abalị m juputara na abụ sitere na Ọkachamara nke Oz. Nwa m nwoke edeghachila "Ọ bụrụ na m nwere Obi" n'ime ụdị ọgbara ọhụrụ a. O mebeghị ya n'èzí ụlọ, n'agbanyeghị. Achọrọ m ịkpali ya ntakịrị ka ọ bulie ụbọ akwara wee kpọọ ya n'oge ezumike na omume taa.
Mgbe m hụrụ vidio a na 3R.e.Medium, egosiri m ya ya ma ọ kpaliri ya iweta ụbọ akwara ya na mmegharị taa. Nwa m nwoke enweghi nsogbu ileta igwe mmadu not mana obughi igwe mmadu n’amaghi ihe na-abia. Cheedị ịme na ụzọ ụgbọ oloko Paris! Nke ahụ bụ ihe ndị a incredibly nkà folks mere:
Ikekwe nke a ga-akpali gị! O sitere n'ike mmụọ nsọ nwa m nwoke!
PS: N'abalị ikpeazụ m nwekwara Bill mgbazinye Wiz ya mere anyị nwere ike ịnweta ngbanwe nke ijeụkwụ. 😉
Kedu ka m siri lie Digg (My Fault)
Enweghi m egwu egwu mana achoro m ije ije n'otu uzo ma wepu nne ya, agbanyụrụ m Quincy Jones, nwayọ jams iji lelee nke a, chee Doug, nke a nwere ike ịbụ gị, mụ na Chris na-arịdata na EL na Chicago, hapụ ya. echiche ka mma, gị na Chris nwaa ya ma m ga - ejide viedo cam! nnukwu ọrụ
Mar 4, 2007 na 10: 56 AM
M nọnyeere gị na nke ahụ, JD! Enwere m ike iburu ihe edeturu na enwere m ike ịgba egwu banyere 100 lbs gara aga. Anọgidere m na-agwa nwa m nwoke mgbe ọ bara ọgaranya ma ama na m ga-eso ya dịkarịa ala otu abụ na ogbo.
Echere m na ọ na-echegbu onwe ya. 🙂
Nkọwapụta nwere nnukwu ụdị nke obi na-adị ya (na ikuku n'abalị a).
Ndo, ọ bụ ụzọ zoro ezo na ntọhapụ nke Mushroomhead
Kedu album dị na nke ahụ? Nwa m nwoke na-enwekarị mmasị Mushroomhead. M a fan of SlipKnot onwe m… tumadi na okporo ụzọ na m ga-achọ iwe m. Ma obu nke a ma obu ama ama (Ana m ege ihe niile!).
Hey – Ahụrụ m otu a n'anya. Daalụ maka ịkekọrịta ya. Ihe ndị ọzọ niile na-agafe isi m! (ps. Achọrọ m ịgwa Mike ka o nwetakwuo ihe na saịtị ya!)